Deepa Shree Niraula – Interview in E-Celebs
Topic: Deepa Shree Niraula – Interview in E-Celebs
Author Topic: Deepa Shree Niraula – Interview in E-Celebs (Read 15712 times)
« on: July 09, 2014, 04:45:08 PM »
Comedy actress Deepa Shree Niraula is born to be an actress. In 2060 BS Deepa Shree started ‘Tito Satya‘. In addition to the the serial she is also busy in ‘Dhaniya ki Duniya’. She is also preparing new movie ‘Wada No. 6′. She says,6number isalucky number for her and the team. […]
Source: Deepa Shree Niraula – Interview in E-Celebs
Re: Deepa Shree Niraula – Interview in E-Celebs
« Reply #1 on: July 12, 2015, 02:28:21 PM »
Deepa to direct film
« Reply #2 on: June 27, 2016, 01:55:26 PM »
दीपाश्री निरौला, कलाकार
अभिनय गर्न मैले विराटनगरबाटै सुरु गरिसकेकी थिएँ ।
०४८ सालको कुरा हो, म १६ वर्षकी थिएँ ।
चलचित्र ‘अग्निपथ’मा कजरी (गाजली)को भूमिकामा अभिनय गर्न पाएकी थिएँ । त्यो मेरा लागि ठूलो मौका थियो । त्यतिवेला चलचित्रमा अनुहार देखाउन पाउनु नै ठूलो कुरा थियो, पारिश्रमिकबारे त सोच नै आउँदैनथ्यो । तर, मेरा लागि त्यही मौका फलदायी साबित भयो ।
अग्निपथको मेरो अभिनयलाई ‘बेस्ट न्यु कमर अवार्ड’ दिइयो । यो ‘अवार्ड’ मैले पाएको चिठी गाउँमै पुगेको थियो ।
चिठी पढेपछि म खुसीले उफ्रिएँ । चिठी देखाउँदै छरछिमेकका घर–घर पुगेँ । त्यतिवेला दौडँदा मेरा आँखा भुँइमा थिएनन्, खुसीले नाच्दै दौडिएकी थिएँ म । त्यसरी दौडिँदा पैतालामा सिसाले काटेको थियो । रगत बगेको पनि पर्वाह गरिनँ मैले । त्यो पुरस्कार लिन म काठमाडौं आएँ । अभिनय श्री पुरस्कार लिएपछि सबैले हौसला बढाउनुभयो, चलचित्र क्षेत्रमै काम गर्नुपर्छ भनेर । अग्रजहरूले काठमाडौंमै बसेर संघर्ष गर्न सुझाब दिनुभयो । तर, एसएलसी दिएर बसेकी मलाई घरबाट सजिलै काठमाडौं पठाउनुहुन्नथ्यो ।
एकबारको जुनीमा संघर्ष त गर्नैपर्छ भन्ने मुड चल्यो । मैले काठमाडौंमै बस्ने निर्णय गरेँ । बुबाले ‘काठमाडौं नजाऊ’ भन्नुभयो । उहाँको ठूलो जोडलाई पनि मेरो जिद्दीले जित्यो । म काठमाडौंमै बस्ने भएँ । त्यसपछि छरछिमेकले बुबालाई भनेछन्, ‘तेरी छोरी नौटंकीमा लागी ।’
सुरुमा म काठमाडौंमा आफन्तकहाँ बसेँ । तर, बिस्तारै अप्ठ्यारो लाग्यो । बिजुलीबजारमा साथीहरूसँग डेरामा बस्न थालेँ । क्याम्पस भर्ना भए पनि खासै जान्नथेँ । परीक्षा दिन मात्र जान्थेँ । डेरामा बस्दा सधैँ पैसाको अभाव भयो ।
आफ्नै ढिपीले काठमाडौं बसेकाले घरमा माग्न पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो । त्यसैले काम खोज्न थालेँ । मदनदास श्रेष्ठलाई फोन गरेँ । अग्निपथमा काम गर्दा नै उहाँलाई चिनेकी थिएँ । उहाँको फोन नम्बर लिएकी थिएँ । उहाँ रेडियो नेपालमा नाटक विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । ‘आऊ न त, सहयोग गरौँला,’ भन्नुभयो । म गएँ ।
‘पाहुना’ नाटकमा बाल कलाकारको भूमिका दिनुभयो । खुसीले धेरैबेर रोएँ ।
उहाँले मेरो अभिनय हेरेर ‘क’ श्रेणीमा नाम राखिदिनुभयो । एउटा नाटक खेलेको तीन सय रुपैयाँ पाएँ । पहिलो पारिश्रमिक बुझ्दा मलाई लाग्यो– अब त म काठमाडौं नै किन्न सक्छु । हामी कोठामा स्टोभमा खाना पकाउँथ्यौँ । त्यो पैसाले मट्टीतेल किनेँ । चामल र तरकारी पनि किनेँ । अन्य खानेकुरा पनि किनेँ । अहिले पनि पारिश्रमिक हातमा पर्दा त्यही तीन सय रुपैयाँको झझल्को आउँछ ।
मेरो पहिलो कमाइ त्यो तीन सय रुपैयाँले मलाई पैसाको महत्त्व चिनायो । अहिले लाखौँ रुपैयाँ कमाइ गर्दा पनि म त्यो तीन सय रुपैयाँको मूल्यलाई भेट्न सक्दिनँ । त्यो तीन सय रुपैयाँले दिएको खुसी लाखौँलाख कमाइले पनि जित्न सकेको छैन ।
« Reply #3 on: January 19, 2017, 03:13:57 PM »
« Reply #4 on: February 12, 2017, 11:59:40 PM »
Deepa-Shree-Niraula-Hot-Swiming -02-12--23_54_57.jpg (210.52 kB, 640x427 - viewed 169 times.)
« Reply #5 on: February 13, 2017, 12:01:33 AM »
Quote from: dave123kid on January 19, 2017, 03:13:57 PM
Deepa-Shree-Niraula-Hot-Swiming -02-12--23_55_09.jpg (193.92 kB, 640x426 - viewed 190 times.)
« Reply #6 on: October 11, 2017, 07:04:18 PM »
« Reply #7 on: October 12, 2017, 03:27:16 AM »
budhi kanya ...